Iprojekthi: Iintaka zasendle ezingenamkhawulo-Ukuzonwabisa ngeGoogle Maps | Martech Zone
Iprojekthi: Iintaka zasendle ezingenamkhawulo-Ukuzonwabisa ngeGoogle Maps
NgeCawa, ngoJulayi 29, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abantu abanobubele ngaphaya Iintaka zasendle ezingenamkhawulo bacele uncedo lwam ekuguquleni iimephu zabo zevenkile ziye kwi Uphando. Ukuba uyazibuza ukuba kutheni ndithe cwaka nje kutshanje, ayisiyiyo into yokuba ndikhutshiwe-kungenxa yokuba ndinyanzela ukuba ndibethe le projekthi ngaphandle kwepaki!
Kananjalo, ndiqala umsebenzi omtsha ngokusisigxina ngeveki kwaye ndifuna ukuqinisekisa ukuba siyakwazi ukuhambisa kakuhle ngaphambi komhla wokugqibela! Ngenxa yoko, ndiye ndacela uncedo… uStephen ebesenza umsebenzi omnandi kwaye omnye umhlobo wam, u-Todd, uzakusinceda ukuba sisebenzise kwaye sicoce nayiphi na ikhowudi ngaphambi kokuziswa.
Ngamafutshane, isicelo sakhiwe kwi-PHP, i-MySQL, kunye ne-Ajax kwaye iyindlela yeendwendwe zeentaka zasendle zokukhangela iindawo ezikufutshane nazo. Idatha igcinwe kwiifayile ze-KML zokulungiselela ukusebenza kunye nokuthatha ithuba lezona zinto ziphambili nezona zibalulekileyo zeGoogle Map API. Kukho ubunzima obongezelelekileyo okoko idatha igcinwe kwindawo engaphezulu kwesinye kodwa yenye yeengxaki zomceli mngeni.
Nanku umboniso wangaphambili (osebenza ngokupheleleyo!) Icandelo lolawulo apho abalawuli banokungena khona kunye nokuhlaziya indawo zevenkile zabo kwimephu:
Kusekho umsebenzi omncinci ekufuneka wenziwe, kodwa inkqubela phambili ibimnandi ukuza kuthi ga ngoku. Kufuneka silayishe isiseko sedatha ye-GeoIP ukuqikelela indawo ekuyo iindwendwe, kunye nokubonelela ngemikhombandlela kuyo nayiphi na indawo evela kwidilesi yotyelelo. Izinto ezimnandi! Yiba nomonde, kwiiveki ezimbalwa siza kubuyela esiqhelweni.
Jul 30, 2007 ngo-7: 02 AM
Umhle, Doug! Sisanda kuphumeza into efanayo Ufaniso eza kusungulwa kule veki. Iyafana kakhulu ngokusebenzayo, ngaphandle kokuba sivumela ukulayishwa kwefayile yabathengisi kwaye songeze iCanada ngokunjalo. Izinto ezipholileyo!
Owu, kwaye sivuyisana nomsebenzi omtsha. Sijonge phambili ukuva ngakumbi ngayo! /Jim
NgoJulayi 30, 2007 ngo-8:20 PM
Kubonakala ngathi iprojekthi iza kakuhle, Doug. Ndiqinisekile ukuba uyonwabela imiba yokuyila yokujongana neprojekthi efana nale.
Ukubonelela ngeengcebiso eziya kuphucula iinjongo zoshishino jikelele zomthengi wakho kujongeka njengeyona nto inamandla kakhulu kuwe – umsebenzi olungileyo!